Fiarahamonina Indizeny Miaina Zava-tsarotra Noho Ny Disadisa Ao Amin’ny Faritra Amerika Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2015 18:05 GMT
Fianakaviana mandeha lakana ao amin'ny Renirano Rupununi Ambony , avaratry ny tendrombohitra Kanuku. Sary: Allan Hopkins
Anisan'ny vondrom-piarahamonina indizeny Pemón Arekuna ao Sakaiká, 125 kilaometatra miala ao Santa Elena de Uairén i LP, izay tsy ambara eto ny mombamomba azy noho ny antony ara-piarovana. Santa Elena no tanàna lehibe voalohany ao amin'ny distrikan'i Gran Sabana ao Venezoela, akaiky ny sisintany mitoka-monina manasaraka ny firenena amin'i Brezila sy Guyana. Isaky ny te-hiverina any amin'ny toerana nahaterahany miaraka amin'ny fianakaviany izy, mandray fiarakaretsaka na fiara fitateram-bahoaka izy ary miditra lalindalina ao anaty ala.
Efa nantsoin'ireo razamben'i LP hoe Ikén ity faritra antsoina amin'izao fotoana hoe “Goiana” ity, araka ny voalazan'ny bokin'i Mariano Gutiérrez Salazar Pemon Culture (Cultura Pemón, UCAB 2002). Asongadina ao amin'ny sarintany Venezoeliana ho Guayana Esequiba na “Zona en Reclamación” (Faritra Takiana) io saingy tsy mahasahy miteny na inona na inona ny hafa. Faritra tantanin'ny Repoblika Koperativan'i Goiana izy fa lazain'ny Repoblika Bolivarianan'i Venezoela fa ao anatin'ny zarataniny.
Teraka tao Parima i LP, avy amin'ny vondrom-piarahamonina Arekuna miorina ao ambadiky ny Tsipika Schomburgk, sisintany voafaritra tamin'ny taonjato faha-19 taorian'ny ady sisintany teo amin'i Venezuela sy Guiana Britanika (Guayana ankehitriny). Na izany aza, rehefa navoaka ny taratasy manamarina ny fahaterahany, voasoratra fa teratany tao San Rafael de Kamoirán, vondrom-piarahamonina Arekuna Pemon miorina ao amin'ny morony andrefan'ny faritra voamarika mena ao amin'ny sarintany eto ambany izy.
Nolokoina mena: ahitana ny sisintany Goyaney eo anelanelan'ny renirano Essequibo sy Cuyuni. Faritra maitso: ahitana ny sisintany Goyaney eo anelanelan'ny renirano Cuyuni sy ny ranomasimbe Atlantika. Takian'i Venezuela ireo faritra roa ireo. Sary nalaina tao amin'ny Wikipedia, Creative Commons license
Novain'ny misionera vahiny ho Advantista nandritry ny tapany voalohan'ny taonjato faha-20 ny vondrom-piarahamonina Parima. Manome topi-mason'ny fiovan'izy ireo ny tsipalotra nivoaka tao amin'ny gazetiboky Adventist Missions Quarterly (telovolana fahatelo, 1942) ;
Ao amin'ny Misionan'i Parima ry Rahalahy sy Ranabavy R.E. Brooks. Manana olona marobe izy ireo ao amin'ny kilasy batisan'izy ireo, ary maro ireo natao batisa tamin'ny 1941. Tonga ao Venezoela ny Indiana mba hianatra, ary mampita ny hafatra indray izy ireo avy eo. Nitsidika an'i Parima ireo mpisorona sy jeneraly Katolika avy ao Venezoela, ary miresaka tsara momba ny asa sy ny fomba fampiasantsika amin'ny fampianarana. Lehilahy mainty avy ao Nikaragoà ny rahalahy Brooks, saingy lehibe teo anivon'ny Indiana, ary toa mety tsara aminy ny miasa ho azy ireo.
Mitondra vatsy mandritra ny dia maharitra adiny valo manavatsava ala mikitroka mankany Parima i LP sy ny havany. Tsy misy fadin-tseranana mahazatra hanaovana tatitra. Indraindray, hoy izy, mijanona atsasa-dalana izy ireo alohan'ny iampitana renirano mba ahafahana mahandro sakafo, mandro ary miala sasatra mandra-maraina. Ny ampitso maraina, aorian'ny sakafo maraina, mandray ny sakeli-dalana mankany amin'ny toerana alehany izy ireo.
Manonona ny teny Parima miaraka amin'ny lantom-peony izy. Arekuna no tenin-drazany ary nianatra niteny anglisy izy tamin'ny mbola kely. Nahavita nahafehy ny teny Espaniola – teny tsy voasakan-tsisintany ao amin'ny faritra izy – raha nandao ny Iraka Parima ny ray aman-dreniny mba hampiely filazantsara ao amin'ny vondrom-piarahamonina Taurepán, izay mitovy fiteny amin'izy ireo.
Amin'ny fomba ofisialy i LP dia Pemon Arekuna. Nanomboka tamin'ny lalàmpanorenan'ny Repoblika Bolivariana ao Venezoela nanan-kery tamin'ny 1999, mankato ny vondro-piarahamonina sy ny vondrona indizeny misy azy ny karam-panondrom-pirenena vaovao.
Mihevitra izy fa vondrona teratany maro no monina ao amin'ny faritr'i Essequibo ao Goiana: Sarao, Warao, Arawako, Karina, Patamuná, Arekuna, Akawaio, Wapishana, Makushi ary Wai Wai.
Saingy maro amin'ireo vondrona ireo ihany koa no mipetraka ao amin'ny andaniny sy ankilan'ny sisintany ary efa nenjehan'ny Departemantan'ny ny fifindra-monina sy ny Sampan-draharaha misahana ny vahiny ho mitoetra tsy manana antontan-taratasy tao Santa Elena.
“Raha miverina izy ireo, dia ho afindra toerana any Esequibo”, hoy i LP.
Mangataka amin'ny vahoaka Warao ny manampahefana Venezoeliana mba hihevitra ny tenan'izy ireo ho Pemon, mba tsy handraisana azy ireo ho Guayanés, tetikady fanavakavahana manaisotra ny fiavian'izy ireo izany.
Monina any Venezoela sy Guayana ny Arawako, betsaka indrindra, miaraka amin'ny Warao, Karina, Arekuna sy Akawaios.
Toerana telo ao amin'ny fanjakana Bolivariana ao Venezoela i Santa Elena de Uairén, Tumeremo sy Puerto Ordaz, mandeha any amin'ny hopitaly sy manangona vatsy isan'andro ireo vondrona ireo.
Mihevitra ny tenan'izy ireo ho Goyaney na Amerindianina izy ireo.
Zara raha mahafantatra izany tantara izany ny fitondram-panjakana andaniny sy ankilan'ny sisintany saingy misy vondrona olom-pirenena Breziliana sy ny Venezoelana mitady volamena sy diamondra ao amin'ny faritra. Araka ny filazan'i LP, misy mihitsy aza “Shinoa manapaka hazo” ao ihany koa.
Nandritra ny vanim-potoana 1930 sy 1940, “mpikomy ny ray aman-dreniben'i DD – sy ny havan'ny ray aman-dreniben'i LP, tsy nety nanao akanjo sy nankany am-piangonana izy ireo.”
Nandao an'i Parima izy ireo ary niditra lalina tao amin'ny faritra Kuyuní. Nanorim-ponenana tao Inawai, hatrany Las Claritas izy ireo, izay nahatongavan'ny iraka Advantista taty aoriana, ka nidiran'izy ireo.
Araka ny filazan'ny DD:
Avy ao Las Claritas, 88 kilometatra mankao San Martín de Turumbán, akaikin'i Tumeremo (distrikan'i Sifontes ao amin'ny Fanjakana Bolívar), ny teny Anglisy no tena ampiasain'ny mponina teratany.
Mihevitra i DD fa iray sy mitovy ihany ny San Rafael de Kamoirán sy ny Misiona Parima: samy vondrom-piarahamonina Arekuna izy roa tonta ireo. Ny misionera Katolika no nitory ny evanjely tamin'ny San Rafael de Kamoirán ary ny Advantista no nitory teny filazantsara tamin'ny Parima tao natin'ny vanim-potoana iray.
Ny San Martín de Turumbán sy ny San Ignacio de Yuruaní, samy distrikan'ny Fanjakana Bolívar dia vondro-piarahamonina natsangan'ny mponina teratany avy ao Esequibo, ireo izay nanaiky ny zom-pirenena Venezoelana saingy nanjary mpitsoa-ponenana taty aoriana.
Mikasika ny ady tany eo amin'i Venezoela sy Guayana, dia hoy i DD:
Tsy misy dikany aminay izany olana izany. Mifamangy ny olona sarahan'ny sisintany
Raha nilaza kosa i LP hoe:
Atao fitaovana politika ireo solontenanay avy amin'ny roa tonta, izany no mahatonga anay tsy maintsy miaraka sy manao fanambarana ho [vahoaka] teratany.
Ao amin'ny boky Cultura pemón, pejy maromaro no natokana ho an'ny Makunaima, mpilalao be herim-po ao amin'ny angano Pemón.
Milaza ny tantara iray fa “tahaka ny Pemon tsara, mankany Ikén mba hikaroka vatsy” i Wei, Sun sy ny rain'ny Makunaima rehetra.
Amin'izany, manaraka ny diany ny taranany, na dia mafy aza ny dia.